अञ्जना हत्याकाण्ड–किन गरे जेठाजुले आफ्नै बुहारीको हत्या - Sabaithari.com
अञ्जना हत्याकाण्ड–किन गरे जेठाजुले आफ्नै बुहारीको हत्या
महानगरीय प्रहरी वृत्त, चापागाउँका प्रमुख राजकुमार खिउजुले प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको दुई दशक नाघिसक्यो । तर, जेठाजुद्वारा बुहारीको हत्या गरिएको घटनाले उनलाई चकित बनाएको छ । ‘जागिर खाएको यत्रो वर्ष भइसक्यो । यस्तो विभत्स घटना देखेको थिइन’, डीएसपी खिउजु भन्छन् ।
घटनास्थल हेर्दा एउटा प्रहरी अधिकारीकै आङ सिरिङ हुन्छ भने सर्वसाधारणलाई कस्तो लाग्दो हो ? घटना हो, बिहीबार दिउँसो ललितपुरको ढोलाहिटीमा भएको अञ्जना महत हत्या । प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुग्दा उनको टाउकोको थोरै छाला मात्रै शरीरमा अड्किएको थियो । खुट्टाले भुइँ छोए पनि आधा शरीर खाटमै थियो । कोठामा रगतको आहाल थियो । अञ्जनामाथि कतिपटक हतियार प्रहार गरियो भन्ने लख काट्नसमेत मुस्किल छ ।
खुला रुपमा देखिने खत त कति हो कति ! कपडा पनि अधिकांश ठाउँ काटिएका थिए । घटनास्थल पुगेका प्रहरी अधिकारीहरु आफैं प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘कसरी मानिस यो हदसम्म पनि जान सक्छ ?’ तर, प्रहरीको कामै अपराध अनुसन्धान गर्ने हो । जस्तो अवस्था भएपनि अनुसन्धान गर्नैपर्छ । त्यसैले प्रहरीले प्रारम्भिक जाँच मुचुल्का तयार पारे र लाशलाई पोष्टमार्टमका लागि पठाउने तारतम्य मिलाए ।
जब खुकुरी लिएर छोरा आए
दिउँसो करिब साढे दुई बजेतिर उज्वल दौडिँदै आमा भएतिर आए । छोरा हल्ला गर्दै आएपछि तल्लो तलामा सुतेकी उनी ब्युझिइन् । ‘पुलिस बोलाइदिनू‘’, परैबाट पुष्पाले आवाज सुनिन् । उनले छोराको कुरा बुझिनन् ।
काममा गएका ससुरालाई दिउँसो घरबाटै बुहारीको हत्या भएको खबर गयो । तर, सुरुमा उनले पत्याउनै सकेनन् । भन्छन्, ‘सुरुमा छिटो आउ भन्दा मलाई विश्वासै लागेन । काममा छु, अहिले किन आउनु भनेको थिएँ ।’
बुहारी हत्या आरोपमा पक्राउ परेका उज्वल म्यूजिसियन हुन् । उनले चर्चित गीत ‘सुन साइली‘’, ‘छक्का पञ्जा २’, ‘काले दाइ.. काले दाइ..’ लगायतमा कला देखाएका थिए । तिहारपछि भने उनले जागिर छाडेका थिए ।
आमा पुष्पा पनि उज्वलले आफ्नो मोबाइल ह्याक भएको सुनाउने गरेको बताउँछिन् । ‘कहिले मान्छे पठाएर सुराकी गर्दा रहेछन् । कहिले को मान्छे र्मयो भनेर तनाव दिन्थे’, उनी भन्छिन्, ‘सधैं उसको दिमाग घुमाइदिन्थे ।’ कमललाई त्यसरी धम्की दिने व्यक्ति शिव राई भएको परिवारको दाबी छ । एक दिन छोरा(बुहारीलाई पछ्याउँदै राई घर छेउसम्म आइपुगेको उनको भनाइ छ ।
के उज्वलले बुहारीको विभत्स हत्या गर्नुको कारण डिप्रेसन नै हो, वा अरु केही ? यो विषय भने प्रहरीको अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै खुल्नेछ । अहिले उनीविरुद्ध ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरेर बयान लिने काम भइरहेको छ ।
अन्तरजातीय विवाहका कारण घटना भएको हुनसक्ने भन्दै छानविन गर्नुपर्ने माइती पक्षको माग छ । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पागलले र्मायो भनेर अपराधीलाई बचाउने खेल भइरहेको छ, तर ऊ पागल होइन । अपराधीलाई बचाउने काम नहोस् ।’
महतका छिमेकी भने दाजु(भाइ र उनीहरुका श्रीमतीबीच कहिल्यै झगडा नदेखिएको बताउँछन् । ‘यो परिवारको यति राम्रो सम्बन्ध थियो कि सबैले उदाहरणीय मान्थे’, एक छिमेकीले भने, ‘एक्कासि यस्तो घटना बाहिर आउँदा पत्याउनै गाह्रो भइरहेको छ ।’
चापागाउँ वृत्तका डीएसपी खिउजु भने उज्वलले सामान्य व्यक्ति सरह व्यवहार गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘उनले हत्या स्वीकारेका छन्’, खिउजुले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हतियारसहित उनी रंगेहात समातिएका हुन् । त्यसैले उनले हत्या गरेको होइन भन्ने कुरै आउँदैन ।’ यद्यपि, घटनामा अन्य कसैको संलग्नता खुले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिने उनले बताए । source-onlinekhabar.com